Ciyaarihii ugu dambeeyay ee bilaashka ah ee Android - Sii deynta, Faallooyinka, Xeeladaha | Androidsis (Bogga 8)
Kubic waa Ketchapp Games 'sharad loogu talagalay 3D ama Tetris cubic ah
Ciyaaraha Ketchapp waxay soo bandhigayaan soo jeedintan loo yaqaan Kubic taasina waxay noo keeneysaa nooc ka mid ah Tetris oo ay dhererkoodu yihiin cubic.
RollerCoaster Tycoon Classic wuxuu dib u soo celiyaa mid ka mid ah jilistayaasha moowduucyada ugu fiican
RollerCoaster Tycoon Classic wuxuu dib noogu soo celinayaa mid ka mid ah jiliyayaashii caadiga ahaa ee aad ku dhisi laheyd jardiinada ugu fiican.
Nitrome's Dachshund wuxuu ku soo laabtay Silly Sausage Doggy Dessert
Nitrome wuxuu dib noogu soo celinayaa eeyga sausage ee leh Silly Sausage Doggy Dessert, oo ah barxad yar oo qaas ah oo leh heerar badan.
Qarxinta Shimbiraha Xanaaqsan ayaa ah nooca loo yaqaan 'Candy Crush Candlo' oo uu hindisay Rovio
Xanaaqa Shimbiraha careysan waa sharadka cusub ee Rovio, laakiin waxay si cad u koobiyeynaysaa Candy Crush inbadan oo ka mid ah ciyaartiisa imaatinkeeda cusub.
Nintendo waxaa ka go'an inuu sii daayo 2-3 kulan oo taleefannada casriga ah sanadkiiba
Nintendo waxay umuuqataa inay si aad ah uga go'an tahay inay hesho meel weyn oo mobilada ah iyadoo sanadle ah la siidaayo labo ilaa seddex cinwaan.
Nintendo wuxuu weydiyaa ciyaartooyda inta ay ku bixin lahaayeen Super Mario Run
Nintendo waxay dooneysaa inay hesho qiimaha saxda ah ee fiidiyowyadooda fiidiyowga tan darteedna waxay bilowday sahan ay ku weydiineyso qiimaha ay ku bixin doonaan Super Mario Run
Final Fantasy iyo cayaaraha kale ee weyn ee loo yaqaan 'Square Enix' waa la iibinayaa ilaa Janawari 5
Haddii aad raadineysay inaad iibsato mid ka mid ah Final Fantasy ee ku yaal Android ama Sirta cajiibka ah ee Mana, waa waqtiga ugu fiican.
4 ciyaaro tareen ah oo ay tahay inaadan seegin sinnaba
Haddii tareenadu ay yihiin waxaaga, 4-ta kulan ee fiidiyowga qaaska ah ee loogu talagalay Android ayaa kaa caawin doona inaad ku raaxaysato Kirismaskan waqtiga adduunka oo dhan.
Super Mario Run wuxuu helaa 40 milyan oo soo dejin 4-ta maalmood ee ugu horreysa
Super Mario Run wali lama imaanin Android, laakiin waqtigan xaadirka ah wuxuu ku socdaa si aad u fiican iOS, halkaasoo uu gaadhay 40 milyan oo soo degsasho ah
Cusbooneysiinta "Ender Update" ayaa ugu dambayntii timid 'Minecraft Pocket Edition'
Cusbooneysiinta "Ender Dragon" ayaa ugu dambeyntii imaaneysa Minecraft Pocket Edition waxayna ciyaarta ka dhigeysaa nooca 1.0 ee Kirismaska.
4-ta kulan ee fiidiyowga ah ee ugu wanaagsan Android ee aad ku ciyaari karto Kirismaska
4 ciyaarood oo fiidiyoow ah oo ay tahay inaadan ka maqnaan inaad u nuglaato iyaga Kirismaska. Arcade, dhufto, RPG iyo pinball gaar ah ayaa ku sugaya.
Nintendo ma qorsheynayo inuu ku daro waxyaabo dheeri ah Super Mario Run
Super Mario Run waa mid ka duwan qaabka moobiilka ee hadda socda iyadoo la ogyahay inaysan jiri doonin wax cusbooneysiin ah oo ku saabsan waxyaabaha cusub.
Ka hel Deux Ex GO iyo Lara Croft GO bilaash shirkadda Amazon Underground
Khadka dhulka hoostiisa mara ee 'Amazon Underground' waxaad ka heli kartaa Deux Ex GO iyo Lara Croft Go oo lacag la'aan ah Kirismaskan.
Ka taxaddar barnaamijyada been-abuurka ah ee Super Mario Run ee loogu talagalay Android
Ka digtoonow, dadka isticmaala Android, barnaamijyada been abuurka ah ee Super Mario Run ee ku sii badanaya internetka ka dib markii la bilaabay ciyaarta ee iOS.
Capcom siideynta dhammaan lixda kulan ee asalka ah ee Man Man bisha Janaayo
Bishii Janaayo, Ciyaartoyda Android waxay lahaan doonaan taariikh aad u qaas ah imaatinka 6 ee cayaaraha asalka ah ee weyn ee Man Man.
Tareenka u qaado si aad u soo qaadatid rakaabkiisa adoo beddelaya wadiiqooyinka ku dhaqma Tan!
Dhaqanka Tani waa ciyaar xiiso leh oo arcade-ku xeel-dheer oo carqalad kugu abuuri doonta inaad ku baashaasho ciyaarta xiisaha leh.
Solitairica waxay qaadataa bilicda ugu sareysa waxa had iyo jeer ahaa kalinimada
Isku darka qaybaha ayaa ka dhigaya kulankaan loo yaqaan Solitairica mid aad u fiican taasna waxay bixisaa caraf udgoonkaan ciyaar xiiso leh oo aanad ka caajisi doonin.
Mime xun iyo raashin badan oo deg deg ah oo waalan oo loo yaqaan Fast Food Rampage
Dhammaan gowraca waa inaad ku sameysaa Rampage Cunto Degdeg ah leh kumanaan hamburgers, smoothies iyo si fiican u jajabiyey tufaax tufaax ah
Ku hogaami shirkaddaada tareenka guul ku saabsan xiisaha iyo baaxadda yar ee Tareennada
Ku hoggaami shirkadda tareenka ee uu awoowgaa dhaxlay guusha ku gaadhida Rails Tiny iyo madadaalo leh. Ciyaar fiidiyoow ah oo ku faaneysa farshaxan pixel wanaagsan
Qabatinka ciyaarta fiidiyowga waxaa loo yaqaan Symmetria laga bilaabo maanta
Xujo weyn oo la yiraahdo Symmetria ayaa u timid inay caqabad ku noqoto maskaxdaada iyo awooddeeda inay ogaato booska ka horreeya.
Haddii aad jeceshahay Zelda, Oceanhorn ayaa kaa yaabin doonta isbedelka ugu horreeya
Haddii ciyaaraha nooca Zelda ay yihiin waxaaga, Oceanhorn ayaa si fudud kaaga dhigi doonta inaad jacayl gasho sidaas darteed waxaad ku ciyaari kartaa cutubka koowaad bilaash.
Shanta kulan ee ugu duuban Play Store sanadkii 2016
Waxaan kaaga tagi doonaa liiska shanta kulan ee ugu duuban Google Play Store sanadkaan 2016 ee dhamaanaya
5-ta kulan ee ugu wanaagsan Facebook Messenger Instant Games
Ciyaaraha degdega ah waa ciyaaraha cusub ee Facebook Messenger ee aad ku ciyaari karto si aad ula asaxaabto saaxiibbadaa. Shantaan ayaa ugu fiican.
Hill Climb Racing 2 wuxuu jiifay ku dhowaad laba maalmood
Ciyaar ku saleysan ciyaartoy badan isla markaana hadda hoos u dhigeysa server-yada, taas oo ka hortageysa in la ciyaaro labada qaab ee ugu muhiimsan.
Pokémon GO wuxuu ugu dambeyntii helayaa Pokémon cusub iyo daabacaadda gaarka ah ee Kirismaska ​​ee Pikachu
Ilaa Diseembar 29, waxaad ugaarsan kartaa jidadka daabacaadda gaarka ah ee Kirismaska ​​ee Pikachu oo ka heli Pokémon cusub Pokémon GO
Pokémon GO 'Gen 2' Faahfaahinta Cusbooneysiinta waa la helay
Pokémon GO wuxuu dhawaan heli doonaa cusbooneysi cusub jiilka labaad ee Pokémon. "Gen 2" waa cusbooneysiintaas.
Dagaallo halyeey ah oo u dhexeeya kumanaan dagaalyahanno iyo Titans ah Dawns weyn ee Titans
Dawns of Titans waa istiraatiijiyad-waqtiga dhabta ah iyo ciyaarta fiidiyowga ee dhismaha boqortooyada leh Titans weyn.
Bareega Busted waa mid iska caadi ah oo ka yimaada Ciyaaraha Ketchapp in kastoo xoogaa ka sii hooseeya
Ciyaaraha Ketchapp waxay dib ugu soo laabanayaan isku dhacii Busted Biriigyada, ciyaar fiidiyoow ah oo u muuqata muuqaalkeeda hodanimo maxaa yeelay waa iska caadi sida kuwa kale oo badan.
U horseedi qabiilkaaga inay ku guuleystaan ​​cadaawayaashaada Dagaalkii Polytopia
Dagaalkii Polytopia waa ciyaar fiidiyow oo qaab ilbaxnimo ku dheehan tahay kaa hor mari doonta qabiilkaaga iyo kuwa kula tartamaya inaad si naxariis darro ah u qabsato.
Samorost 3 waa shaqo farshaxan ciyaarta fiidiyowga ah
Samorost 3 wuxuu ka yimid abuurayaasha Botanicula iyo Machinarium. Ciyaar u taagan garaadka ay ku leedahay dhammaan meelaheeda qarsoon.
Layaabka leh Halka Halxidhaaha Halxiraalaha Hadhku u Seexdo
Halkee Hooska hurdadu ay tahay mid khibrad u leh ciyaar xujo ah oo hooska iyo laydhadhku ay ku geynayaan dhamaadka heerka.
Jeebka Ecotone wuxuu beddelaa xeerarka heerarka heer kasta
Ecotone Pocket waa barxad asal ah oo isku dayaysa in la beddelo sharciyada noocan ah ciyaarta heer kasta oo heerar ah oo ay leedahay.
Super Mario Run waxaa lagu ciyaari karaa oo keliya qadka internetka
Miyamoto wuxuu sharxayaa sababaha Super Mario Run ugu baahan yahay xiriir internet si loo ciyaaro. Waqtigan xaadirka ah waxaa kaliya laga heli karaa macruufka.
Sony waxay dib ugu soo noqotey dhabbihii ciyaaraha casriga iyadoo 10 cinwaan Playstation ah
Sanadka 2017-ka Sony waxay dib u soo celin doontaa ciyaaraha fiidiyowga ee Playstation ee loogu talagalay Android iyo iOS. Waxay si sax ah u noqon doontaa tobanka ugu horeysa ee laga bilaabi doono Japan iyo Aasiya.
Ciyaaraha Rockstar ayaa u Dabaaldegaya Sannad-guuradii XNUMX-aad ee Bully Iyadoo Launch Android
Ciyaaraha Rockstar, sidii ay ku samaysay cinwaanno kale, waxay billowday Bully, ciyaar fiidiyoow ah oo aad ku tahay nin xun fasalka, ilaa Play Store.
Niantic si loogu dhawaaqo jiilka labaad ee Pokémon usbuuca soo socda
Diisambar 12 waxay umuuqataa taariikhda ay tilmaamtay Niantic si ay u muujiso waxa noqon doona jiilka labaad ee Pokémon ee weyn Pokémon GO.
Google wuxuu ku tijaabiyaa qaybaha barnaamijyada iyo ciyaaraha fiidiyowga si gooni gooni ah Bakhaarka Play
Ugu dambeyntiina, iyo sannado sugitaan kadib, Google wuxuu bilaabaa imtixaannada si loo kala saaro waxa barnaamijyadu ka socdaan cayaaraha fiidiyowga ee Google Play Store.
Abuurtay Dagaal, Horumar Transformers cusub gu'ga 2017
Guga 2017, taageerayaasha Transformers-ka waxay awoodi doonaan inay ku raaxeystaan ​​ciyaar cusub oo Android ah, Transformers: Forged to Fight.
Ciyaaraha Telltale ayaa ku dhawaaqay ilaaliyayaasha cusub ee taxanaha ciyaarta Galaxy
Sida Batman ama Game of Thrones, Ciyaaraha Telltale waxay daabici doonaan ilaaliyeyaal cusub oo taxane ah oo fiidiyoow ah oo Galaxy ah sanadka 2017.
Tigerball's guusha iyo walxaha fiisigiska weyn iyo madadaalo
Waxaad ubaahantahay inaad kubbadda ku garaacdo dheriga ciyaar fiidiyoow ah oo la yiraahdo Tigerball oo adeegsata fiisigiska shey weyn oo dhab ah.
Zombie wuxuu ku tartamayaa ciyaaro badan oo xiiso leh oo leh Runly Run
In Deadly Run waxaad wajihi doontaa ciyaartooy kale oo u labisan sida zombies aad urin karto oo dareemi karto markay isku dayaan inay hadafka kaa hor gaaraan.
Hill Climb Racing 2 wuxuu kuu kaxeeyaa inaad ku raaxeysato jinsiyadaha ciyaartoy badan
Haddii sheygaagu uu yahay tartanka baabuurta ee ciyaaraha multiplayer si aad ula tartantid ciyaartoy kale, Hill Climb Racing 2 waa adiga.
Isku day inaad dib ugu soo ceshato dadnimadaada argagax nafsiyeed ee DISTRAINT: Pocket Pixel Horror
Ciyaartan waa in lagu soo bandhigaa iskuulada halkaasoo naqshadeeyayaasha mustaqbalka loo tababaray inay fiiro gaar ah u yeeshaan sida loo sameeyo ciyaar naxdin leh.
Waxaad ka dareemi doontaa guuxa Formula 1 on your Android la F1 2016 ka Codemasters
Waxaad horay u haysatay Formula 1 oo ku saabsan Android-kaaga oo leh nooca buuxa ee ciyaarta ee ay sii daayeen Codemasters xagaagii hore xagaaga iyo kombuyuutarrada leh F1 2016
Ciyaaraha ugu wanaagsan ee Android si looga faa'iideysto buundada Diseembar
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa xulashooyinka ugu wanaagsan uguna xiisaha badan ciyaaraha Android si aad uga faa'iideysato buundadan dheer ee Diseembar
Sida loo ciyaaro Facebook Messenger Instant Games
Maalmo hadda, waxaad fursad u haysatay helitaanka liiska ciyaaraha fiidiyowga ee Facebook Messenger. Waxaan ku barinaa inaad marin u hesho.
Maareyn waqtiga gooldhaliyahaan kaladuwan ee loo yaqaan Time Locker
Qabooji waqtiga si aad u baabi'iso dhammaan noocyada cadaawayaasha shaashadda ku jira ciyaartan weyn oo kala duwan ee loo yaqaan 'Time Locker', oo laga heli karo Play Store.
Lemmings waxaan aadeynaa waqtiga godadka godadka Caveman HD
Caveman HD si fudud ayaa loo yaqaan 'Lemmings clone' laakiin waxaa lagu dejiyay adduunyadii hore. Hantidooda waa godadley
Ku kaxee baabuur lagu rakibay bambo waqti ku socota Tartanka Bomb Time
Waqtiga Bomb Race waa ciyaar madadaalo ah oo aan la imaanin ujeedo kale oo ah inaad wakhti fiican ku qaadatid in muddo ah gaarigaas iyo qaraxaas saacaddiisa wata.
Super Cat Bros qaabka Super Mario ugu badan laakiin bisadaha leh
Haddii aad raadineyso ciyaar si aad u joojiso hamigaaga inaad ku raaxeysato ciyaarta ugu horreysa ee mobile-ka Nintendo ee Super Mario Run, iskuday Super Cat Bros
Horgaleyaal badan oo dhiig badan leh ayaa kugu sugaya qabatinka Bowmasters-ka
Haddii aad raadineyso ciyaar iska caadi ah Kirismaska ​​soo socda, Bowmasters waa midka ugu fiican ee u dhexeeya asxaabta iyo qoyska.
Nitrome wuxuu la soo noqdaa Hop Swap, oo ah barxad taabasho kale leh
Nitrome waa istuudiyaha lagu garto inuu yahay retro iyo farshaxanka loo yaqaan 'pixelated art' ee mid kasta oo ka mid ah ciyaaraha fiidiyowga ee uu ka bilaabayo Google Play Store.
Ciyaar fiidiyaha Black Friday ee ugufiican iyo heshiisyada barnaamijka ee loogu talagalay Android
Haddii aad raadineyso heshiisyada ugu wanaagsan ee barnaamijyada iyo ciyaaraha fiidyowga Jimcaha Madow maanta, ha moogaanin ballanta boostadan oo aan ka soo aruurinno qiimo dhimis.
Limbo-ka weyn ee laga bixiyo Google Play Store oo ah 0,50 XNUMX
Limbo waa mid ka mid ah cayaaraha fiidiyoowga ee ugu wanaagsan ee hadda ku yaal Play Store. Waxaa la iibinayaa Jimcaha Madow oo ah € 0,50.
Dib u eegista Play Store hadda waxay muujineysaa dhibcaha dhinacyada gaarka ah ee ciyaaraha
Dhowr isticmaale ayaa ka warbixinaya inay hadda qiimeyn karaan dhinacyada ugu muhiimsan ee ciyaarta ka dhexeysa Bakhaarka Play Store sida: gameplay, kontaroolada iyo sawirada
Microsoft waxay keentaa Windows Solitaire-kaaga Android-ka maanta
Microsoft Solitaire Collection ayaa hadda loo heli karaa Android marka ay maanta bilaabato. Isla Windows kaligiis laakiin leh xayeysiin
Google waxay ku dhawaaqeysaa Google Play Indie Games Contest ee Yurub
Tartanka Ciyaaraha Ciyaaraha Google Play Indie ayaa waxaa shaaciyay G-weyne isla markaana cayaaraha horumaray hadda waa la soo gudbin karaa si loo galo tartanka.
Tooshka Mobile-ka wuxuu ku muujiyaa awoodiisa fiidiyow cusub oo fasalka Kitsune ah
Tooshka Mobilada ayaa loo maleynayaa in la sii deyn doono ka hor dhamaadka sanadka waxaana ka soo muuqan doona godod, PvP, dukaamada ingame, iyo waxyaabo badan oo lagu xiro.
Ditto wuxuu ugu dambeyntii yimid Pokemon Go, waxaan ku baraynaa tabaha lagu ugaarsado Ditto
Maanta waxaan ku tusineynaa tabaha lagu ugaarsado Ditto ee Pokemon Go, waana mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la la'yahay ee Pokemons uu ugu dambeyntii yimid.
Ka soo bood boggaga oo u rogo Ketchapp: Flip
Flip waa mid ugub ah Ciyaaraha Ketchapp waxayna adeegsataa aasaasiga si loo siiyo makaanikada ciyaarta balwadaha leh taabasho weyn xagga muuqaalka ah.
Ha u oggolaan in kuwa meteorites-ka ee dhacaya ay ku burburiyaan dabeecadaada Khatarta Dodgers
Khatarta Dodgers waa ciyaar fiidiyoow ah oo waxoogaa gaar ah sababtoo ah gameplay, animations iyo 3D-da si fiican loo qaabeeyey. Si aad ugu raaxaysato, way dhalatay.
Cube Knight waa cubic of Crossy Road iyo Minecraft oo leh ficil fara badan iyo seefo lagu garaaco
Qaab-dhismeedka cubic ee sawir-gacmeedka 'Crossy Road' ayaa ku jira Cube Knight: Battle of Camelot, oo ah ciyaar fiidiyow oo aad u fiican marka la eego farsamada.
4 ciyaar fiidiyoow ah oo nooca Fiidiyowga Orodka ah oo la sii daayay sanadkan 2016
Haddii aad kujirto orodyahannada Temple-nooca aan dhammaadka lahayn, afartan ciyaarood ee fiidiyowga ah ayaa hubaal inay kugu wareeri doonaan shaxdooda iyo muuqaalkooda farsamo
Ma lihin Mahadnaq, laakiin waxaan haynaa cusbooneysiin Hoyga Dhacsan oo cusub
Hoyga dhaca ayaa loo cusbooneysiiyay Thanksgiving iyo mid aad u xiiso badan oo cusub: awood u lahaanshaha sahaminta godadka hoyga
Bethesda iyo Zen Studios waxay u wada shaqeeyaan saddex miis oo Pinball ah oo ka kala socda DOOM, Fallout iyo Skyrim
Diisambar 8, seddex miis oo cusub ayaa laga bilaabi doonaa heshiiska u dhexeeya Bethesda iyo Zen Studios ee 3 kulan: DOOM, Fallout iyo Skyrim
Pokémon GO wuxuu helayaa cusbooneysiin ballaaran bishii Diseembar iyada oo la adeegsanayo ganacsiga, dagaallada PvP, iyo ilmaha Pokémon
Pokémon GO wuxuu daaha gadaashiisa ka helaa cusbooneysiin soo socota bisha Diseembar oo ka koobnaan doonta 100 Pokémon, PvP, ganacsiga, iyo ilmaha Pokémon.
On Diisambar 15, Super Mario Run waxaa lagu sii daayaa macruufka, goorma ayuu noqon doonaa Android?
Super Mario Run ayaa ugu dambeyn imaan doona IOS bisha Diseembar 15 lamana oga goorta ay sii deyn doonto Android.
Peter Molyneux wuxuu kaa rabaa inaad horseed u noqotid safar dheer oo ku socda The Trail
Trail-ku waa kan cusub ee Peter Molyneux, oo ah mid ka mid ah xariifnimada ciyaaraha fiidiyowga ee soo sawiray qaybtaas ciyaaraha ee aad tahay ilaah.
Booska iyo Galbeedka Duurku waxay ku midoobeen toogte aad u xiiso badan Cowboys vs UFOs
Ciyaar si aad ugu raaxeysato sida geesinimada leh adoo ka takhalusaya shisheeyahaas xun ee doonaya inay kugu afduubaan si kasta.
Burcad Burrito Bison si loo ciribtiro duulaanka digirta jelly ee Burrito Bison: Launcha Libre
Musaaricadu waxay timaaddaa shaashadda taleefankaaga casriga ah oo leh cayaartan fiidiyowga ah ee lagu magacaabo Burrito Bison: Launcha libra. Madadaalo iyo midabbo galabtii qabow
Marka ciyaarta fiidiyowgu ay la wareegto naftaada si aadan u joojin ciyaarta: Halista Sare
Sare u kaca waa ciyaar fiidiyoow ah oo ku faanaysa xoogaa caqli badan, taabasho asal ah iyo qabatin weyn oo wax walba buux dhaafiya.
A space shooter classic soo laabtay: Galaga Wars
Galaga Wars waa soo noqoshada kuwa wax toogta ee caadiga ah oo buuxin doona shaashaddaada moobiilka nooc kasta oo qaraxyo ah
Juicy Jelly Barrel Blast waa ciyaar arcade la qabatimay taas oo ah inaad ku toogto jelly adigoon joojin
Waxa ugu badan ee Juicy Jerry Barrel Blast waa jelly in ay tahay inaad ka gudubto foosto ilaa foosto si aad u hesho tirada ugu badan ee dhibcaha suurtogalka ah.
Miitomo wuxuu ku helayaa cusbooneysiin weyn fariimaha gaarka loo leeyahay iyo qolal shaqsiyeed
Miitomo wuxuu helaa waxa noqon lahaa cusbooneysiintiisii ​​ugu weyneyd tan iyo markii lagu daabacay labada iOS iyo Android sanadkan 2016.
100 Pokémon cusub ayaa dhawaan imaan kara Pokémon GO
Laga soo bilaabo koodhka jira ee APK ee arjiga, waxaa la ogaaday in Pokémon GO uu heli karo ilaa 100 cusub Pokémon
Google waxay iibsataa LeapDroid, emulator Android ah oo loogu talagalay ciyaaraha
LeapDroid waxay u gudubtaa gacmaha G weyn iyo labadeeda aasaasiye waxay bilaabi doonaan inay ka shaqeeyaan mashaariicda la xiriira ku dayashada.
Meelaha loo yaqaan 'Transes dunes', gorges iyo dhexsocodka dhiiqada Asphalt Xtreme
Gameloft waxay soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan oo dhanka garaafka ah taasoo si buuxda kuu gelin doonta jawi aad u ba'an oo leh noocyada gawaarida oo dhan.
Abuur kooxda ugu fiican superheroes iyo kormeerayaasha halyeeyada DC
Dhamaan geesiyaasha iyo sharwadayaasha DC Comics waxay kugu sugayaan DC Legends, ciyaar dagaal ku saleysan oo leex leexasho leh RPG iyo xaqiijin farsamo oo weyn.
Raac DiCaprio oo noqo yeeyda Silicon Valley: Billionaire
Dooxada Silicon: Billionaire waa ciyaar fiidiyoow jilitaan ah oo kuu soo jeedinaysa inaad noqotid yeyda Silicon Valley. Guul aduunyada ganacsiga.
Dhis saldhigaaga si aad iskaga difaacdo nafta zombie horde iyo aadanaha ee Zombie Anarchy
Zombie Anarchy waxay kuu soo jeedineysaa inaad dhisto saldhiggaaga si aad isaga difaacdo zombies iyo aadanaha ku jira xasuuqii aad ku jirtay.
U isticmaal shaabuug si aad u baabi'iso cadaawayaashaada oo aad uga sameysatid dheriga 'Undergrave'
Dungeons oo ay ka buuxaan wuxuush iyo cadaawayaal ayaa kugu sugaya Undergrave, ciyaar fiidiyoow ah oo ah silsilad silsilad lagu qodbay ayaa muhiim noqon doonta
Parallyzed waa madal isdaba joog ah oo aad ku caawin karto labada gabdhood ee mataanaha ah
Haddii aad raadineyso madal asal ah oo leh heer sare oo farsamo iyo muuqaal ah, Parallyzed waa mid ka mid ah dalabyada ugu fiican xilligan.
Pokémon GO ayaa lagu cusbooneysiiyay Pidgeys yar
Haddii aad daashay maxaa yeelay waxaad had iyo jeer heshay Pidgeys, cusbooneysiinta cusub ee Pokémon GO ma helaysid sidii hore oo kale.
Superheroes waxay ku guuleystaan ​​Android-kaaga DC Legends hadda la heli karo
Haddii aad raadineyso ciyaar 3D ah oo superheroes iyo super villains ay yihiin halyeeyada, ha moogaanin ballanta aad la leedahay Legends DC.
Maalinta Hay ayaa la cusbooneysiiyay shaqaalaha maalinlaha ah Rosa iyo Ernesto kuwaasoo kaa caawin doona beertaada
Hay Day waxaa loo cusbooneysiiyay sheeko cusub: Rosa iyo Ernesto. Waa laba shaqaale maalinle ah oo kaa caawin doona howlaha aasaasiga ah ee beertaada.
Khayaaliga sayniska iyo duurjoogta galbeedku waxay ku dhex milmeen Space Marshals weyn 2
Haddii aad raadineysid ciyaarta nooca konsoleerka ah ee 'Android', Space Marshals 2 ayaa ah tan ugu fiican ee aad hadda heli karto sababtoo ah tayada farsamo ee weyn.
Gali maskaxda Knight Dark ee taxanaha 'Batman the Telltale Series'
Batman Taxanaha 'Telltale Series' waa ciyaarta fiidiyowga cusub ee ka socota Ciyaaraha TellTale oo aad si buuxda ugu dhex geli doonto maskaxda Bruce Wayne iyo Batman.
Is rasaaseyn ku dhacday Dhulka Mushroom waa madal waalan oo waqti fiican lagu qaato
Haddii aad raadineyso madal tayo wanaagsan leh iyo madadaalo wanaagsan, oo leh Rasaas lagu gooyo Dhulka Mushroom waxaad ku garaacday goobta inaad waqti fiican hesho.
Ku darso kuwaa bahallada ah ee kuu soo socda ee xiisaha iyo xarragada leh Just Trap
Just Trap waa ciyaar fiidiyoow ah oo aad u baahan tahay inaad fartaada ka dul mariso shaashadda si ay uga caawiso gabadha yar inay soo qabato dhammaan bahalladaas.
Samatabbixiyeyaasha lagu haysto xeryaha dagaalka ee Dustoff Heli Samatabbixinta 2
Keydso POWs, dhis munaarado kontorool raadiye kana ilaali kolonyada gawaarida xiisaha iyo xiisaha leh ee Dustoff Heli Rescue 2
U bood midig u gudub Xariijinta Nasashada ee Ciyaaraha Ketchapp
Break Liner waa ciyaar kuu suuro galin doonta ciyaarta ugu horeysa ee aad ciyaarto si aad uhesho dhibcaha ugu sareeya ee aad awoodid.
PinOut waa ciyaar caan ah oo arcade ah oo siinaysa nooca 'Pinball' maroojin
Haddii aan abuuri lahayn Pinball gebi ahaanba la yaab leh oo cusub, hubaal PinOut wuxuu noqon lahaa fikradda ugu fiican ee aan yeelan karno.
Knights Duel, waxaan falanqeyneynaa ciyaarta ugu fiican jousting for Android
waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Duel of Knights ciyaar bilaash ah oo laga heli karo dukaanka arjiga oo lala yaabi doono ciyaartiisa
Waxaad hadda lasocotaa Knight Dark in Batman taxanaha TellTale
Batman the TellTale Series ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store si bilaash ah si uu kuu geeyo magaalada Gotham
Ciyaaraha ugu xun ee loogu talagalay Halloween this 2016
6 ciyaaro naxdin gaar ah oo kaa qaadi doona waxyaabaha ugu naxdinta badan iyo jawiga dabiiciga ah ee naftaada ka murugoon doona habeenka Halloween
Pokémon GO wuxuu soo bandhigayaa wuxuushyada ugu argagaxa badan Halloween
Pokémon GO wuxuu geyn doonaa taxane wuxuush ah habeenka Halloween oo bilaabmaya Oktoobar 26 wuxuuna dhammaanayaa Nofeembar 1.
Pokémon Go waa la cusbooneysiiyay waana kuwan wararka
Pokémon Go wuxuu gaarayaa nuuciisa 0.43.3 oo shaqeynaya cayayaanka yar yar ee horey loo ogaaday loona soo bandhigo warar xiiso leh
Sida loo daro Add ons ee Minecraft Pocket Edition
Mawduuca 'Minecraft Pocket Edition' waxaan horay u haysanay waxyaabo lagu daro si loogu daro isbeddelo xag-jir ah oo ku saabsan ciyaarta ama adduunyada aan kula raaxeysanno asxaabta
Hack 'n' Slash in its nuxur saafi ah indho qabashada Smashing the Battle
Burburinta Dagaalku waa khayaano 'n' slash oo ujeedadeedu tahay in la keeno tallaabada ugu fiican iyo 3D shaashadda casrigaaga Android.
Ciyaar madadaalo ah, fudud oo pixelated leh Taabasho 'n' Slash
Tubada 'n' Slash waa ciyaar arcade ah oo kugu quusinaysa sahaminta godka si deg deg ah si aad uhesho oo aad awoodo inaad furto geesiyaal badan
Dagaalada multiplayer-waqtiga dhabta ah ee Frantic ayaa kugu sugaya Slash Arena: Online
Arena Slash Arena: Khadka tooska ah waa ciyaar fiidiyoow beta ah oo aad wajihi doontid ciyaartoy kale oo waqtiga dhimashada dhabta ah ku jira
RETSNOM waa mid ka mid ah astaamaha asalka ah iyo xujooyinka sannadihii la soo dhaafay
RETSNOM waa hawo nadiif ah oo loogu talagalay noocyada la jajabiyey ee aaladaha, xujooyinka iyo waxqabadka, maadaama ay isku darayso dhammaan qeybahan.
Orodyahan kale oo aan dhammaad lahayn oo boodbood aan joogsi lahayn leh Milicsiga
Haddii aad raadineysid madadaalo madadaalo leh, Milicsiga ayaa awoodi doona inuu buuxiyo caajiskaas iyo daqiiqadaha caajiska ah ee maalinta iyada oo aan faan badan.
Goor dhaweyd oo aan waligeed ka sii fiicnayn, waxaan hore u haysannaa Lara Croft: Ilaaliyaha Iftiinka ee Dukaanka Play
Lara Croft: Ilaaliyaha Iftiinka ayaa loo heli karaa qof walba afar sano ka dib isagoo sugaya inay lumiso gaar ahaantaas Sony.
3 ciyaarood oo fiidiyow ah oo lacag badan labixiyay oo loogu talagalay Android
Kuwani 3 kulan waxay muujinayaan heerka aan hadda ku haysano Android. The Legend of Skyfish, The Big Butcher iyo Ha Gaajoon waa seddexduba.
Xaaladda Sheekada Minecraft Qeybta 1 hadda waa bilaash Dukaanka Play-ka
Haddii aad raadineyso waxyaabo cusub adduunka Minecraft, waxaad haysataa qaybtii ugu horreysay ee Minecraft: Sheekada Habka maanta oo bilaash ah.
Geedaha iyo Halyeeyada Zombies hadda waa la soo dejin karaa
Geedaha iyo Halyeeyada Zombies, cinwaanka cusub ee shirkaddan guuleysatay, ayaa hadda loo heli karaa in laga soo dejiyo Play Store.
YouTurbo, ciyaarta youtubers Isbaanishka
YouTurbo waa ciyaar ay astaamaha ugu waaweyn ay yihiin kuwa ugu caansan Isbaanishka, sida Rubius, Giorgio, DaniRep ama Lele.
Duufaanta Runner Adventure waa orod aan dhammaad lahayn oo leh midabyo badan iyo xawaare wareer
Haddii aad raadineysid qurux muuqaallo, xawaare wareer dhaqdhaqaaqa iyo dhufto aan dhammaad lahayn oo orodyahanno ah, Dabeecad Runer Adventure ayaa adiga kugu habboon.
Ku hagaaji ciyaartaada kadib ciyaarta Flappy Golf 2
Flappy Golf 2 waa sii socoshada taxanaha weyn ee lagu gartay internetka iyo ciyaartoy badan. Noodlecake ayaa markale sameeyay.
U bood oo toogasho wax kasta oo ku dhaqaaqa qolka arcade ee loo yaqaan Agent Aliens
Haddii aad raadineyso qaraxyo, hub waaweyn iyo koox dhan oo ka mid ah dagaalyahannada mustaqbalka, Wakiilada Shisheeyaha waa ciyaar adiga loogu talagalay.
Ka caawi bisadan yaabka leh safarkiisa ee loo yaqaan 'Milky Way in Mr. Cat'
Mr.Catt waa ciyaar fiidiyoow ah oo kaa hor marineysa xujooyinka xariifka ah iyo bisad sida halyeeyga, oo ay tahay inaad ku caawiso goobtiisa cirifka ah
Game A dabacsan oo isticmaala origami in Paper Baalalka
Waraaqaha Wargeysku waa ciyaar dib-u-dhac ah oo adeegsata origami si ay u soo bandhigto joogitaan qurux badan oo la taaban karo oo lagu daro ciyaar-ciyaar
Ka soo boodi madal si aad ula socoto ciyaarta cusub ee Ketchapp ee loo yaqaan Hop
Haddii aad raadineysid wax cusub oo caadi ah oo kugu dhegaya oo aad naftaada la qaniini karto asxaabtaada ama qoyskaaga, Hop adiga ayaa kuu ah hadda wixii ka dambeeya, markaa waqti ayey ku qaadataa inaad soo dejiso.
Sony waxay isu diyaarineysaa inay ku soo bandhigto ciyaaraha fiidiyowga moobiilka leh 5 cinwaan
Sony waxay isku diyaarineysaa inay ku dhawaaqdo kahor sanadka waxa noqon doono shan cinwaan oo mobilo ah, oo la daabici doono bisha Maarso 2017.
Ugu dambeyntii FIFA Mobile hadda waa loo heli karaa qof walba
Ugu dambeyntiina, toddobaadyo kadib markaan sugeyno, waxaan heysanaa FIFA Mobile oo loo heli karo qof walba inuu u dagaallamo inuu noqdo ciyaaryahanka ugu fiican adduunka.
Dagaalada ku saleysan dagaalka ee ka dhanka ah ciyaartoy kale oo ka tirsan Mafia III: Rivals
Haddii aad raadineyso lacag bixin si aad ugu guuleysato dagaalka ku saleysan leexashada oo leh muuqaallo aad u wanaagsan, Mafia III: xafiiltamayaasha ayaa iska leh laga bilaabo maanta Dukaanka Play-ka.
Kabadhka skate-ka si loo siiyo boodbooyinkii ugu cajiibka badnaa Halfpipe Hero
Qaabka ugu wanaagsan ee arcade-ka, Halfpipe Hero wuxuu fuliyaa ujeeddada fudud ee ah inuu kaaqeyb qaato kaararka uu skateboard gudbinayo.
Ka caawi Little Red Hook safarkiisa Moonwhale ee Halyeeygii weynaa ee Skyfish
Haddii aad raadineyso xiise, sixir iyo ciyaar wax walba heer farsamo leh leh, The Legend of Skyfish waa mid ka mid ah kuwa ay tahay in laga bixiyo Android.
Pixels Advance waa mid si dhaqso ah u socda oo loo yaqaan 'indie arcade a la Pac-Man'
Pixels Advance waxay ku siineysaa ciyaar indie ah oo loo yaqaan 'retro pixelated indie' oo ah qaabka loo yaqaan 'Pac-Man' oo ay tahay inaad la kulanto shanta maamul ee ugu dambeeya
Hubi hubkaaga oo ku baabbi'i shisheeyahaas qaabka ugu Pang ee Bakhaarka Buugga
Ciyaar fiidiyow ah oo arcade ah oo aad u fiican qaabka Pang-ka ee kugu sugeysa Buugga 'The Bug Butcher', oo ah kii ugu dambeeyay ee ka imanaya istuudiyaha weyn ee Noodlecake Studios
Halfbrick wuxuu soo bandhigayaa Dan the Man, oo ah barxad xiiso leh oo ay tahay inaad ku laado dariiqii hore
Dan the Man waa cusub oo ka socda Halfbrick Studio, hal abuureyaasha Fruit Ninja, markanna waxay ku hor dhigayaan arcade garaacid em oo tayo sare leh
Cusbooneysiinta Hoyga dhaca ee howlgalladda cusub iyo dhacdooyinka gaarka ah
Hoyga Fallout waxaa loo cusbooneysiiyay 1.8 si ay ula keento howlo cusub iyo dhacdooyin gaar ah oo ku siin doona waxyaabo gaar ah taariikhaha sida Halloween.
Carmageddon ee loogu talagalay Android hadda waa bilaash in la soo dejiyo
Hadda nooca Android-ka ee ciyaarta halyeeyga ah ee Carmageddon ayaa lagala soo bixi karaa bilaash (oo leh xayeysiis gooni ah iyo micropayments) oo ka socda Play Store.
Pokémon GO wuxuu kudarsan doonaa abaalmarino si looga dhigo isku dheelitirnaan raaxo iyo qancin
Ugaarsigaas dheeriga ah waxaad kuqaadan kartaa Pokémon nooc cayiman sida dabka markii aad hesho bilada Kindler.
Telegram wuxuu ku daraa taageerada HTML 5 kulan
Telegram waxay soo bandhigeysaa cusbooneysi cusub oo kuu ogolaanaya inaad ku ciyaarto HTML 5 ciyaarood adigoo adeegsanaya boodhadh adigoon ka bixin dalabka
Harry Potter iyo Wizarding World dhulkiisa oo ku yaal Android
Ciyaaraha Lego ee ku saleysan Harry Potter caalamka ayaa durbaba ku jira Android, iyagoo ka faa'iideysanaya jiidashada daahfurka buugii ugu dambeeyay ee saaxir caan ah.
Doorka ugu caansan wuxuu mar kale la yimaadaa Banner Saga 2
Haddii aad raadineyso door wanaagsan iyo ciyaar fiidiyoow ah oo u dhiganta mid kasta oo euro ah oo ay ku kacayso, Banner Saga 2 wuxuu si fiican u buuxiyaa dhammaan rajooyinka.
Samee boodbooyinkii ugu cajiibka badnaa adoo wata baaskiilkaaga ku jira Bambooyin: BMX 3, cusub oo ka socda Noodlecake
Haddii aad raadineyso arcade si aad waqti fiican uguhesho dhabarka baaskiilkaaga, Bambooyin: BMX 3 ayaa ah ciyaarta ugu fiican iyada maadaama ay leedahay fiisigis weyn.
Jungle la taaban karo ama maxay noqon laheyd Sim City weyn oo ku wajahan xujooyinka
Haddii aad tahay taageere Sim City, Jungle la taaban karo waa shardi in la iibsado si loogu raaxeysto ciyaar fiidiyow ah oo u gaar ah oo soo kabanaysa ruuxa halyeeygaas.
La ciyaar culeyska meeraha ee Orbit-ka weyn
Orbit waa ciyaar fiidiyow ah oo garaneysa sida loogu ciyaaro kaararkeeda si aad u wanaagsan marka ay timaado culeyska meeraha iyo meerayaasha ku hareeraysan godadka madow.
Looty Dungeon wuxuu kaa qaadayaa kahor taabashadiisa weyn ee pixel iyo godadka aan dhammaadka lahayn
Looty Dungeon waxaa naqshadeeyay Ciyaaraha Yodo1, oo ah abuurayaasha Waddada Crossy, marka waad fahmi kartaa isku ekaanshaha muuqaal ahaan.
GoodBye Pokemon Go, Hello Root
GoodBye Pokemon Go, Hello Root, sidaa darteed waxaan ku sii sagootinayaa Pokemon Go. Way fiicnayd in aan kula kulmo laakiin jacayl wanaagsan oo xagaaga ah ayay ahayd waqtigii aan macasalaamayn lahaa.
NBA 2K17 hadda waa loo heli karaa Android
Waxay horeyba ugu jirtay NBA 2k17 Play Store. Waxaan kuu sheegeynaa inta ay ku kacayso iyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ciyaartan kubbadda koleyga ee cajiibka ah.
Micro Machines hadda waa ciyaar Android ah
Mashiinnada Micro-ka ah ee mala-awaalka ah waxay ku yimaadaan qaab ciyaar multiplayer ah, oo leh 18 waddo oo 3D ah, 77 gawaari iyo sawiro cajaa'ib leh oo ku saabsan Play Store
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa Mootada Tooshka, oo lagu muujiyey Ciyaartii Tokyo Game
Thanks to video, waxaan ku baran karnaa waxa Tooshlight Mobile noqon doono markii laga bilaabo Android. Gurguurta godka dhabta ah ee a la Diablo.
Vertigo Racing iyo tartankooda gawaarida laga qaado mid ka mid ah filimyada James Dean
Haddii aad raadineyso orodyahan aan dhammaad lahayn oo ciyaarta gawaarida si uu kuugu celiyo 50-meeyadii, Vertigo Racing waa mid ay tahay inaad hadda rakibto.
Ku qufo naftaada sixirka iyo badbaadada gaarka ah ee Ha Gaajoon: Jeebka Jeebka, ee hadda ku socda Android
Ha Gaajoonin: Jeebka jeebka ayaa hadda laga heli karaa Android ee beta-ka dadweynaha si uu kuu geeyo mid ka mid ah badbaadada ugu wanaagsan xilliyadan dambe.
Noqo hacker-ka ugu fiican meeraha ciyaarta Hackers ciyaarta multiplayer
Hackers waa ciyaar fiidiyoow badan oo fiidiyoow ah oo kuu soo jeedinaysa inaad noqoto khawanka ugu fiican adduunka. Ciyaar ka duwan ciyaarta dhismaha ee caadiga ah.
Ka badbaadi waalida aan xadka lahayn ee Crazy Circle, oo ka cusub Ciyaaraha Ketchapp
Circle Crazy waa ciyaar fiidiyow oo cusub oo ka socota Ketchapp oo leh waxyaabo ka badan kuwa inta badan bilaaba isla markaana ku jira qaybtaas caadiga ah
Retro Shooting, biqil 'em ah oo tayo sare leh iyo fududaan weyn dhinacyada oo dhan
Toogashada Retro waa toogasho 'em kor kuu xusuusin doonta halyeeyada 80s iyo 90s ee aad bilaash ku haysatid Google Play.
Sticklings waxay u timaadaa Lemmings, ciyaar fiidiyoow ah oo ay tahay inaad ku hagto ulaha
Sticklings waa ciyaar fiidiyoow ah oo soo jiidanaysa isha dhiirrigelinta ee ahayd Lemmings sidaa darteed waa inaad ku hanuunin dadka ku dhejiya dhammaadka heerka.
Astaamaha Cusub ee Imaanaya Pokemon Go Plus
Cusboonaysiinta soo socota ee Pokémon Go for Android waxaa ku jiri doona dhowr astaamood oo cusub oo ciyaarta ka dhigi doonta mid ka sii wanaagsan oo madadaalo badan.
[UnRoot] Sida loo unroot Android u ciyaaro Pokemon Go. Sidoo kale ansax u ah isticmaalayaasha Cyanogenmod
Maanta waxaan ku tusayaa dhammaan siyaabaha suurtagalka ah ee unroot-ka Android si aad ugu awoodo inaad ku ciyaarto Pokemon Go ama aad u isticmaasho barnaamijyada moobiilka ee lacag-bixinta ah, xitaa Cyanogenmod.
Clash Royale ayaa lagu cusbooneysiiyay qaab tartan cusub, kaarar badan iyo laabta
Hada waad aamusiin kartaa emoticons-ka cayaaraha kulamada Clash Royale waxaadnaheli kartaa qaab tartan cusub, kuraas iyo laabta.
5 ciyaar beta oo cajiib ah oo ka socota Google Play Store oo ay tahay inaadan dhaafin
Dukaanka Google Play waxaa ku yaal kanaalka beta halkaas oo aad ka heli karto ciyaaro fiidiyow oo tayo sare leh oo si fiican loo ciyaari karo.
Kubadda Cagta ama maxay yihiin ciyaaraha ugu caansan uguna qarxa ciyaaraha kubbadda cagta ee aad heli karto
FootLOL waa ciyaar fiidiyoow ah oo xiiso leh taas oo aad ku guuleysan doonto ciyaaro kubbadda cagta oo leh dabinnada ugu doqonsan ee aad wejigaaga ku tuuri karto
By Tutatis! La dagaallama kuwa Roomaanka ah ee nacaladda u leh sarraynta hadda Asterix iyo Asxaabta
Panoramix, Idéfix, Obélix, Asterix iyo jilayaal kale oo badan ayaa kugu sugaya Asterix iyo Asxaabta si aad ula dagaallanto kuwa Roomaanka ah ee inkaaran.
Tuurista Animation wuxuu kuu keenayaa cayaaraha kaararka duurjoogta leh astaamaha ugu caansan Fox
Fox waxay u keentaa Guy Family, Bob's Burgers, Futurama, Aabe Mareykan ah iyo King of Hill ilaa Tuujinta Animation
Hoos kadhagayso munaaradda lix geesoodka ah ee xariifnimada iyo quruxda badan leh!
Lix! waa ciyaar fiidiyoow ah oo lagaa rabo inaad ka saarto baloogyada sameysma munaarad si aad hoos ugu dhigto Hexagon ku taal xagga sare.
Dungeons & Aliens waa difaac munaarad ah oo ah qaabka dhirta iyo Zombies
Haddii aad ku ciyaareyso difaaca munaaradada Cayaaraha 'Popcap Games', waxaad gurigaaga ku arki doontaa Dungeon & Aliens, ciyaar cusub oo bilaash ah.
Isku qas arcade RPG leh pinball oo aad leedahay Barbaric weyn: Halyeeyga Dahabiga ah
Barbaric: Halyeeyga Dahabka ah waa ciyaar isku dhafan makaanikada farsamada kubbadda pinball-ka, RPG-ka iyo dagaalka yar ee layaabka leh ee ku-leexashada.
Pokémon GO wuxuu lumiyaa 80% adeegsadayaasha lacagta la siiyay, laakiin wali waa midka bixiya faa'iidooyinka ugu badan
Pokémon Go wuxuu ahaa guul labadiisii ​​bilood ee nolosheeda, laakiin wuxuu luminayaa uumiga inkasta oo aan lumin dakhli ama dheefo.
[APK] Dhamaan wararka Pokemon Go 0.37. KA DIGTOONOW HADDII AAD XIDHIIDHO !!
Dhamaan wararka Pokemon Go 0.37, oo ah nooca cusub ee ka hortagaya helitaanka dadka isticmaala Root inakastoo aan sidoo kale ku siineyno xalka aad kula ciyaari karto Root
Wadada Crossy waxay soosaartay Cusbooneysiin "Prehistoric" ah oo loogu talagalay Android iyo iOS
Wadada Crossy waxaa lagu cusbooneysiiyay cusbooneysiin weyn oo la socota waxyaabo badan oo la xiriira waqtiyadii hore.
Maamulaha Motorsport, mid ka mid ah jilayaasha ugu wanaagsan F1, oo lagu iibinayo € 0,10
€ 0,10 waxaad ka iibsan kartaa mid ka mid ah qaaciddada ugu fiican hal jilayaal xilligaan Android: Motorsport Manager Handheld.
Sida loo ciyaaro Pokemon Go oo ka socda Android leh xidid
Maanta waxaan ku tusineynaa habka aad ugu ciyaari karto Pokemon Go oo ka socda Android leh Root iyada oo aan loo baahnayn inaad lumiso faa'iidooyinka noqoshada isticmaale Root.
Ku daadiya awooddaas xoogga leh oo u rogo taleefankaaga casriga ah gabal ku yaal Ketchapp Tennis
Tennis-ka Ketchapp, marka laga reebo bixinta hal nooc iyo ciyaartoy badan, waxay kuu oggolaaneysaa inaad u isticmaasho moobilkaaga sidii tanka tennis-ka.
Ku dar waxyaabo aan joogsi lahayn oo ku jira halxiraalahan bilaashka ah ee loo yaqaan Numbo Jumbo
Numbo Jumbo waa ciyaar fiidiyow ah oo gaar ah taas oo ah inaad ku darto bilaa joogsi si aad u hesho dhibcaha ugu sareeya ee suurtogalka ah. Xisaab celinta
U soo dhac sida dhagaxa oo kale oo hoos u dhaca munaaradda ku taal madadaalada Stretch Dungeon
Stretch Dungeon waa ciyaar cusub oo loo yaqaan 'Nitrome' oo leh sifooyin dhowr ah oo lagu amaani karo, sida makaanikada ciyaarta pinball.
Ururi dhammaan acorns ee ciyaartan xiisaha badan ee loo yaqaan Dotorio
Dotorio waa ciyaar aad u baahan doonto inaad ku soo ururiso dhammaan geedaha dahabka ah heerarkeeda 122 ee dhibaatada weyn.
CELL 13, xujo cusub oo ku saleysan fiisigiska walxaha
CELL 13 waa ciyaar xujo ah oo ay tahay inaad ka baxsato 13-ka unug ee adiga ku sugaya in ka badan 65 nooc oo xujooyin kala duwan ah.
Noqo boqorka halgameedka ciyaarta rasmiga ah ee taxanaha TV-ga ee 'Narcos: Cartel Wars'
Narcos: Cartel Wars waa ciyaar dhisme aasaasi ah oo ay tahay inaad noqoto madaxa kooxda daroogada.
Waxaad ku keydin kartaa ilaa 60% dhamaan cayaarahaan Google Play Store
Haddii aad raadineyso inaad iibsato ciyaaro qiimo dhimis ah illaa 60%, liiskan cayaaraha fiidiyowga ee ka socda Google Play Store waa ku dhowaad aan dib loo soo celin karin.
Isgoyska Xayawaanka iyo Astaanta Dabka oo dib u dhacday illaa Maarso 2017
Nintendo ayaa dib u dhigtay sii deynta Xayawaanka Isgoyska iyo Astaanta Dabka illaa Maarso 2017. Laba ciyaarood oo fiidiyoow ah oo ay ahayd inay yimaadaan bilahaan.
Dharka la xiran karo ee Pokémon GO Plus ayaa la heli doonaa Sebtember 16
Sebtember 16 waa taariikhda la bilaabayo qalabka la gashado ee 'Pokémon Go Plus' kaas oo imaatinkiisa la daahiyay markay noqon lahayd Julaay bilawga
Sida loogu ciyaaro akoonnada 2 Pokemon Go isla waqti isku mid ah isla Android-ka. Ku ansax ah barnaamijyada sida WhatsApp, Telegram… ..
Maanta waxaan ku tusayaa sida loogu ciyaaro akoonnada 2 Pokemon Go isla waqti isku mid ah isla Android, oo ansax u ah barnaamijyada sida WhatsApp, Telegram, iwm, iwm.
Nintendo wuxuu ugu dambeyntii u keeni doonaa Mario aaladaha moobaylka Super Mario Run, marka horena iOS
Super Mario Run wuxuu noqon doonaa dabeecaddii ugu horreysay ee halyeey ee shirkadda Japan ee ku degta aaladaha mobilada; hadda kaliya on macruufka
Clash Royale wuxuu ugu dambeyntii u oggolaan doonaa inuu aamusiyo falcelinta
Wixii ku saabsan cusbooneysiinta Clash Royale ee soo socota, kuwa ka soo horjeeda waa la aamusiin karaa si aysan ugu dirin falcelinta dagaallada.
Hadda waxaad u sheegi kartaa Khariidadaha Google markaad ciyaareyso Pokémon Go
Khariidadaha Google ayaa hadda kuu oggolaanaya in lagu calaamadeeyo "Taariikhdaada", oo ah meesha dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada laga duubo, oo leh "Qabashada Pokémons".
Manga-ga weyn ee Naruto iyo taxanaha anime tooska ah ee barnaamijkaaga 'Android' oo leh Ultimate Ninja Blazing
Anime cibaadada iyo taxanaha manga Naruto waxay u timaadaa shaashadda taleefankaaga Android iyada oo loo marayo Ultimate Ninja Blazing oo la heli karo maalmo
Isaga-Nin iyo Awoodda Grayskull! kugu sugi doona He-Man Tappers of Grayskull
Ku noqo Eternia si aad ula dagaallanto Skeletor ee gujiyaha la yiraahdo He-Man Tappers of Grayskull, ciyaar tayo sare leh.
Tus Roofie iyada oo loo marayo saqafyada ugu caansan uguna liita ee Roofbot
Roofbot waxay na geynaysaa Roofie oo aan u baahannahay inaan ka caawino xallinta xujooyinkaas laga helo saqafyada daraasiin heerar ah.
Iibi saamiyada oo aad taajir ka dhigto Roob-weynaha weyn: Ganacsiga Ganacsi
Roobjooge: Ganacsiga Ganacsi waa ciyaar aad u qaas ah oo aad ku baran doontid gacan-ku-helida waxa loola jeedo noqoshada dillaal iibsada ama iibiya saamiyada
Wadada Stony waa Ketchapp cusub oo leh makaaniyiin xiiso leh oo xiiso leh
Ciyaaraha aan caadiga ahayn waxaa ku jira wax yar oo ka mid ah Dukaanka Play-ka iyo Ciyaaraha Ketchapp waa mid ka mid ah khubarada ku jirta ciyaarta noocaan ah. Hadda wuxuu leeyahay mid kale: Waddada Dhagax
Maskaxda Ka Daa! waxaan falanqeyneynaa mid ka mid ah ciyaaraha xujada ugu fiican ee loogu talagalay Android
Falanqaynta dhamaystiran ee Maskaxda On On! mid ka mid ah ciyaaraha xujada ugu fiican ee Android oo aad kula yaabi doontid farsamoyaqaankeeda fiisikiska xiisaha leh
Riptide GP: Renegade ama muxuu yahay muuqaalka muuqaalka leh ee muuqaalka ciyaarta
Riptide GP: Renegade wuxuu ku qaadaa shay-baarkiisa wareegyada biyaha ee loogu talagalay ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ka ciyaara.
Ka caawi shinnida yar sidii ay u soo kaban laheyd dhammaan nectar-ka cayaartaan la safeeyey ee loo yaqaan HiveFall
Ciyaar aan caadi aheyn oo madadaalo leh HiveFall taas oo ah inaad ka caawiso shinnida inay ka soo ururiso ubaxyada ubaxyada sidaasna u siiso rugta
Ka caawi Charlie Dapperbot inuu si nabadgelyo leh ugu dego meesha quruxda badan ee I, Falling Robot
Aniga, Falling Robot waa ciyaar aad u baahan tahay inaad ka caawiso robotka qurxoon inuu ka soo dhaco cirka iyada oo loo marayo aaladda 'gyroscope sensor'.
EA Sports UFC, waxaan falanqeyneynaa ciyaarta dagaalka ugu fiican ee loogu talagalay Android
Falanqaynta fiidiyowga ee EA Sports UFC, mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee dagaalka ee taleefankaaga Android oo aad si bilaash ah uga soo dejisan karto Bakhaarka Play Store.
Quusin wanaagsan oo leh boodboodyada cajiibka ah ee Flip Diving
Flip Quusitaanka waxay ina geynaysaa mid ka mid ah quusitaanka ugu wanaagsan ee la soo boodka Olambikada ee cayaartoyda kala duwan ee kaa sugaya inaad soo ogaatid.
Ka caawi Misty inuu dhex maro godadka godadka iyadoo loo marayo makaanik Khasaaraha Khasaaray
Lost Maze waa mid xeel dheer oo xujo leh oo aad ku caawin karto Misty inay ku laabato gurigeeda iyada oo loo marayo dhammaan noocyada makaanikada.
Magic Mansion waa mid cusub oo loo yaqaan 'monochrome retro platformer' oo ka socda Nitrome
Sixiroolaha yar ayaa ah halyeeyga gaarka ah ee ciyaartaan cusub ee monochrome retro Nitrome ee loo yaqaan 'Magic Mansion', oo leh wanaag badan.
Pokemon Go trick si aad u ugaarsato Pokemon kasta
Maanta waxaan kuu keenaynaa Pokemon Go Trick ugu fiican ee lagu ugaarsado Pokemon kasta, oo ay ku jiraan kuwa la raadinayo ee Legendary Pokemons oo aad u adag in la helo.
Ciyaaraha Top 10 Bilaashka ah
Nitrome waa istuudiyaha ku faano xulasho xikmad badan oo ah cajaladaha fiidiyowga ee ka imanaya dhammaan qaybaha suurtagalka ah sida barnaamijyada, RPG ama orodyahannada aan dhammaadka lahayn.
Pokémon GO wuxuu taabtaa saqafka oo hadda wuxuu ku bilaabmayaa hoos u dhac joogto ah dadka isticmaala iyo soo dejinta
Pokémon GO wuxuu gaaray 45 milyan oo isticmaale maalinle ah oo hada taagan 30 milyan, taasoo muujineysa hoos u dhac yar.
Maxaan ka filan karnaa Mashiinka 'Pocket Edition' ee nooca 0.16
Nooca 0.16 ee 'Minecraft Pocket Edition' ayaa imaan doona iyadoo lagu rakibayo astaamo cusub sida menus cusub, xirmooyin kheyraad iyo waxyaabo kale oo badan.
15-ka kulan ee fiidiyow ee ugu fiican Ciyaaraha Ketchapp
Ciyaaraha Ketchapp waa mid ka mid ah istuudiyaha ugu waxtarka badan. Kuwani waa 15-ka kulan ee fiidiyowga ugu fiican ee ka soo jeeda buugga weyn ee ay ku leedahay Google Play.
2 Pokemon Go Bots cusub oo aadan seegi karin oo aadan seegi karin
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa 2-kan cusub ee Pokemon Go bots, midka ugu badan ee hadda shaqeynaya oo si fiican u shaqeynaya, iyo sidoo kale casharka oo dhameystiran oo ku saabsan sida loo isticmaalo.
Pokémon GO waa la cusbooneysiiyay si Pokémon uu u heli karo qiimeynta hogaamiyaasha kooxda
Nooca cusub ee Pokémon GO wuxuu la yimid qiimeynta Pokémon ee hogaamiyaasha kooxda (casaan, jaalle ama buluug)
Maalinta R Badbaadinta, falanqaynta badbaadada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga Maalinta R Roobka, ciyaar badbaado leh waaqic weyn iyo sheeko gaar ah.
Qabille oo ugu macquulsan uguna xiisaha badan waa Steppy Pants
Steppy Pants ayaa kaa qoslin doona oo baran doona inaad talaabo talaabo talaabo uqaado si halyeeygu uusan u dhicin qof walbana ugu qoslo.
Wave, oo ah wax yar oo layaableh oo ka yimid Ciyaaraha Ketchapp oo leh qaab ciyaareed aad u fiican
Wave waa sheyga cusub ee Ketchapp Games ee ujeedada ka dhigaya mid caadi ah ciyaar ku faaneysa ciyaar ciyaar oo maamusho inay xirto marka hore.
12 kulan madal cusub oo loogu talagalay Android waa inaad isku daydaa
Waxaa jira ciyaaro badan oo madal loogu talagalay Android, sannadkana waxaan haynaa war wanaagsan sida kuwan labadan ka mid ah liistooda.
Perchang wuxuu fiisigiska walxaha u qaadaa heerka xiga ee xujo aad u fiican
Perchang waa ciyaar xujo ah taas oo fiisigiska walxaha uu naga hor mariyo dhammaan noocyada makaanikada oo noo oggolaada inaan wajahno nooc kale oo gameplay ah.
Baadh baadhitaan ku saabsan Mars kulankan adag ee xiisaha leh ee fiidiyowga loo yaqaan Mars: Mars
Mars: Mars waa ciyaar fiidiyow oo tayo sare leh taas oo dhibaatada ku saabsan maaraynta markabka ay kaa qaadi doonto wadada qadhaadhka.
Dagaalka ku-leexashada ee Deux Ex GO, kii ugu cusbaa ee ka dhacay Square Enix oo tayo fiican leh
Square Enix wuxuu soo bandhigayaa ciyaar fiidiyow ah oo tayo aad u weyn leh dhammaan dhinacyada si uu noogu keeno nuxurka Deux Ex ee Android.
Dhimasho Shell, RPG asal ah oo roguelike gaar ah oo kugu dhejin doona gododkeeda
Dead Shell waa ciyaar cusub oo u eg roguelike oo soo jiidaneysa dib u dhackeeda iyo ciyaarta gaarka ah ee ciyaarta oo kaa hor marin doonta nooc kale oo RPG ah.
Ku samee doqonnada ugu doqonsan uguna waalan Dunkers Basketball Madness
Dunkers waa ciyaar fiidiyoow ah oo kubbadda koleyga ah oo aad maxalliga kula ciyaari karto asxaabtaada si aad u muujiso dunnida ugu xilligan xaadirka ah.
Ujeedo qaansadaada si wanaagsan si aad uga ciribtirto goblka madax-xanuun ku dhaca qaansoleyda Yar Yar
Falanqeeyayaasha Tiny waa faneel ficil weyn oo difaac difaac ah oo qaansadu tahay saaxiibkaaga ugu fiican, fallaadhahaaguna waa asxaabtaada ugu fiican.
Snakebird waa xujo aad ku qasban tahay inaad ku caawiso shimbirta yar si ay u hesho midhahaas qaaliga ah
Snakebird waa ciyaar fiidiyow ah oo midabkeedu weyn yahay iyo xujooyin aad u adag oo u taagan dhammaan walxaha farsamo ahaan sida sawirada.
[APK] Pokemon Go bot kii ugu horreeyay ee laga xakameeyo moobaylka Android
Maanta waxaan soo bandhigayaa Pokemon Go bot kii ugu horreeyay ee loogu talagalay Android, bot si aad u xakameyso waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad haysato terminal Android iyo wax kale.
6 barnaamijyo chess ah oo loogu talagalay dadka jecel chess
Waxaan ku haynaa wax yar barnaamijyada chess-ka ee ku jira Android waana adag tahay in la helo qaar ka mid ah kuwa buuxiya baahiyaheena. Waxaad awoodi kartaa inaad sameyso.
[APK] Soo dejiso arjiga la jabsaday ee Pokemon Go si aad u ciyaarto adigoon guriga ka bixin Root la'aan. Ansax ah KitKat, Lollipop iyo Marshmallow
Ma dooneysaa inaad soo dejiso barnaamijka la jabsaday ee Pokemon Go si aad u awoodo inaad ku ciyaarto adigoon guriga ka bixin adigoon u baahnayn xidid iyo noocyada Android KitKat?
5 Ciyaaraha fiidiyowga u eg ee Minecraft ee badbaadada iyo dadka jecel dhismaha
Terraria waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu fiican ciyaaraha nooca loo yaqaan 'Minecraft' waxayna ku jirtaa liistadan shanta ah ee aad ka heli doontid khadadkayaga.
Waxaan u haynaa Bot cusub oo loogu talagalay Pokemon Go oo leh qaab muuqaal ah
Waxaan horeyba uheysanay bot cusub Pokemon Go oo leh interface isticmaale garaaf ah iyo Androidsis waxaan ku bari doonaa sida loo soo dejisto loona qaabeeyo si sax ah.
Best Pokemon Go Hack oo aan xidid lahayn, Android Marshmallow qaas ah
Maanta waxaan kaaga tagayaa waxa ay u tixgeliyaan kuwa badan oo ah kuwa ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'Pokemon Go hack' oo aan lahayn Root si gaar ah loogu fikiray loonaguna talagalay Android Marshmallow.
Pokemon Go Bot Hack mar kale ayuu shaqeeyaa
Burburinta Pokemon Go Bot ee ugu wanaagsan ayaa dib loo heli karaa oo si sax ah u shaqeynaya. Waxaan ku baraynaa sida loo cusbooneysiiyo loona qaabeeyo.
Abuur beel kuu gaar ah si aad ugu korto Eden: Ciyaarta
Eden wuxuu ku hor dhigayaa maareynta beel cusub oo timid jasiirad yar oo Iskotish ah waana in ay sii noolaataa si kasta oo ay tahayba.
Abuuraha Laba Dhibcood wuxuu ka yimaadaa Dhibco & Co, xujo la jeclaysto oo la qabatimo
Dhibco & Co waxaa abuuray abuurayaasha Laba Dhibcood, sidaa darteed quruxda iyo tayada ciyaarta fiidiyowga xujada ah waxaa lagu hubinayaa xagga hore.
Ku tartama ciyaartoy kale tartamada halyeeyada 2D ee ReRunners
Haddii aad raadineyso ciyaar aad kula tartami karto ciyaartoy kale ficil ahaan, tartamo waali ah, ReRunners ayaa adiga ah.
Tababare Tababar Dunida ayaa ku hor dhigeysa ciyaar xujo weyn iyo tareeno xawaare sare leh
Tababare Tababar Adduun waa isku-xujooyin xujo iyo istiraatiijiyad kuu geynaya dhismaha shabakadda tareenka Yurub.
5 Ciyaaraha fiidiyowga ee noocyada shimbiraha ah ee cilmiga fiisigiska walxaha muhiimka u ah
Cayaaraha sida Shimbiraha Xanaaqsan waxay leeyihiin sumadda guud ee macnaheedu yahay haysashada fiisigis shey wanaagsan oo ciyaaryahanka ka dhoolla-caddeeya.
Haddana way shaqaysaa !! Hack Pokemon Tag si dhakhso leh kor ugu qaad oo si toos ah u qabso Pokemons
Maanta waxaan kuu keenaynaa Pokemon Go Hack oo aan ka badnayn Boot naga caawin doona otomaatiga ciyaarta isla markaana si dhakhso leh u siman.
Cusbooneysiinta cusub ee 'Xposed Pokemon' oo ku habboon Pokemon Go 0.31.0.
Maanta waxaan kuu keenaynaa cusbooneysiinta cusub ee Xposed Pokemon oo si buuxda u shaqeyneysa oo la jaanqaadaysa nooca ugu dambeeya ee Pokemon Go 0.31.0.
4 barnaamijyo fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah oo aan aheyn Twitch
Twitch waa barnaamij heer sare ah oo loogu talagalay qulqulka ciyaaraha fiidiyowga waqtiga dhabta ah, in kastoo ay jiraan waxyaabo kale oo aad u xiiso badan.
[APK] Soo dejiso oo rakib nooca cusub ee Pokemon Go, ogow dhammaan wararka ku jira
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa nooca cusub ee Pokemon Go si toos ah apk, waxaan kuu sharaxeynaa sida gacanta loogu rakibo iyo sidoo kale dhamaan wararka oo dhan.
La dagaallama kooxo badan oo zombies ah oo aad la socoto gaarigaaga aadka u hubeysan ee ku jira 'Dead Venture'
Dhimashada Venture waa ciyaar fiidiyoow ah oo aad la kulmi doontid kooxo badan oo zombies ah oo ku yaal gaarigaaga aad u hubaysan.
Dib-u-dhiska magaalada iyadoo la kaashanayo superheroes halyeeyada Heropolis
Halyeeyada Heropolis waxay ku dhigeysaa booska dib u dhiska magaalo burbursan iyo maareynta koox geesiyaal ah oo kaa caawin doona inaad ilaaliso
Abuur boqortooyo leh beertaada digaaga ee Big Egg, Inc.
Haddii aad rabto inaad hodan ku noqoto qaab muuqaal ah, Egg Inc wuxuu ku siinayaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay iyada oo la adeegsanayo maaraynta beer digaag.
Ubood jaranjarooyinka adigoon istaagin ciyaartan balwada leh ee loo yaqaan 'Go Up', oo ka cusub Ketchapp
Ciyaaraha Ketchapp waxay noo keeneysaa Go Up, waa sharadkeeda cusub si loogu daaweeyo caajisnimada qabatinka saafiga ah ee ciyaarta fudud ee qaab muuqaal wanaagsan leh.
Waxaa lasii daayay qeybtii toddobaad ee Minecraft: Sheekada Qaabka sheekooyinka xiisaha cusub
Qeybta toddobaad ee Minecraft: Sheekada Xaaladda ayaa hadda loo heli karaa qof walba, isagoo sugaya qaybta siddeedaad ee ugu dambeysa inuu yimaado bilaha soo socda.
Iskuday Harder, waxa cusub ee ka socda Noodlecake Studios kaas oo meydadku noqdaan aagag
Studio-yada 'Noodlecake Studios' ayaa soo saaray Isku day Harder, oo ah ciyaar fiidiyoow ah oo aan dhammaad lahayn oo orodyahanno fiidiyoow ah oo codkeedu yahay mid aad u qosol badan oo soo jiidasho leh.
La wadaag barnaamijyada, ciyaaraha fiidiyowga, buugaagta iyo in ka badan ilaa 6 qof oo lala wadaago Google Play Family
Google Play Qoyska hadda waa xaqiiqo in lala wadaago dhammaan noocyada waxyaabaha ku jira internetka ugu badnaan ilaa 6 qof oo qoys ah.
Waa inaad sugto illaa Sebtember si aad u iibsato qalabka Pokémon GO Plus
Pokémon GO Plus ayaa la iibin doonaa bisha Sebtembar markii imaatinkeedu dib u dhaco, sida laga bartay akoonka rasmiga ah ee Nintendo ee Twitter.
[APK] Soo degso oo rakib Xposed Pokemon, habka ugu fiican ee lagu ugaarsado Pokemons adigoon guriga ka bixin, xitaa boosteejada Samsung
Maanta waxaan ku baraynaa sida loo soo dejiyo oo loo rakibo Xposed Pokemon ama sida ugu fiican ee loo maro ugaarsiga Pokemons adigoon guriga ka bixin.
Pokémon GO wuxuu dhaafey tirada 50 milyan oo laga soo dejiyey Google Play
Pokémon GO wuxuu ku guuleystay rikoor kale isagoo dhaafaya 50 milyan oo soo dejin ah oo ku saabsan Android. Ciyaarta fiidiyowga ee beddeleysa caadooyinka dadka.
Miitomo waxaa lagu cusbooneysiin doonaa minigame nacnac cusub: Candy Drop
Miitomo wuxuu goor dhow soo kordhin doonaa ciyaar yar oo mini ah oo loo yaqaan 'Candy Crop' oo adeegsan doonta nacnacyada aad in muddo ah urursatay.
Nintendo Saamiyada Fall Markii Maalgashadayaashu ogaadaan inaysan horumarin Pokémon GO
Muujintaas ayaa dhacday usbuucii la soo dhaafay, Jimcihii, Nintendo wuxuu ku sheegay in aysan ka qaybqaadanayn horumarinta Pokémon GO.
Pokémon GO wuxuu muujinayaa hogaamiyaasha kooxda wuxuuna ku dhawaaqayaa wararka: Pokémon cusub iyo karti ganacsi
Maamulaha guud ee shirkadda Niantic, abuurayaasha Pokémon GO, wuxuu ka hadlayaa wararka u imanaya ciyaartan fiidiyowga sannadaha soo socda.
Dhammaan wixii ku saabsan Hoyga burburka, ciyaarta fiidiyowga ee Bethesda oo sii wadaysa helitaanka cusbooneysiinta
Bethesda waxay billowday Hoyga Fallout on Android ku dhowaad hal sano ka hor waxayna sii deysay taxane cusub oo ku daray waxyaabo dheeraad ah.
[APK] Ka taxaddar !! Pokeradar for Pokemon Go hadda waxaa laga heli karaa Play Store iyo APK
Feejignaan !! Pokeradar for Pokemon Go ayaa hadda laga heli karaa Play Store iyo APK, waxaan kuu sheegeynaa khataraha codsigan muddada dheer la sugayay ee loogu talagalay Android.
Qolalka halaagga, ciyaarta cusub ee ka timid abuurayaasha Waddada Crossy oo leh ciyaaro yaryar oo fara badan
Qolalka Cadaabku waa cusub oo ka yimid Ciyaaraha Yodo1, abuurayaasha Waddada Crossy, oo leh qaab muuqaal weyn iyo ciyaaro kala duwan.
Xad-dhaaf muuqaal ah oo muuqaal ah oo 3D ah oo ku jira Kooxda Is-dilka: Ciyaarta
Kooxda Ismiidaaminta ah waa filim cusub oo ku saabsan geesinimada geesinimada leh oo hadda ciyaarteeda ku leh Android Haddii aad raadineyso ficil wanaagsan, waad heli doontaa.
Da'da Booty: Taatikada, ciyaar fiidiyoow budhcad-badeed ah si ay ula wareegto Badaha Koonfurta
Noqo burcad-badeed oo u horseedi doontaada guusha guusha adoo adeegsanaya ciyaartan 3D-da oo leh wax walba oo noqda istiraatiijiyad wanaagsan oo loogu talagalay Android
RazerGo wuxuu rabaa inuu noqdo barnaamijka sheekaysiga ee aad isticmaasho markii aad ciyaareyso Pokémon GO
Haddii aad raadineyso barnaamij sheekeysi ah oo diiradda lagu saaray Pokémon GO, hubaal RazerGo wuxuu leeyahay wax walba oo aad raadineysay mid ka mid ah oo si fiican u qorsheeya weerarrada.
[APK] Cusbooneysiinta cusub ee Pokemon Go 0.29.3 hadda waxaa laga heli karaa Play Store iyo APK
Waxaan horeyba uheynay cusbooneysiinta cusub ee Pokemon Go cusbooneysiinta 0.29.3 ee laga heli karo Play Store iyo si toos ah loogu soo dejisan karo qaabka APK.
Trick Android: Sida loo ciyaaro Pokemon Go ee Muuqaalka Muuqaalka
Maanta waxaan ku tusineynaa xeelad Android ah oo noo oggolaan doonta inaan ku ciyaarno Pokemon Go qaabka muuqaalka muuqaalka ama muuqaalka muuqaalka.
Razer wuxuu diyaar u yahay inuu soo bandhigo barnaamij wada sheekeysi ah Pokémon GO usbuuca soo socda
25-ka Luulyo, barnaamijka Racer ee u gaarka ah ayaa la bilaabi doonaa si ciyaartoyda Pokémon GO ay ula xiriiraan dadka kale gudaha
Sida loo qabsado Pikachu Pokemon Go
Maanta waxaan ku tusineynaa khiyaanada lagu qabsado Pikachu ee Pokemon Go, markaa haddii aad rabto inaad hesho Pokemon-kan quraafaadka ah, ha seegin waxa aan kuu sheegayno.
Sida loo dalbado Gym-ka Pokémon GO
In Pokémon GO, marka laga reebo ugaarsiga Pokémons aan joogsi lahayn, waa inaad sidoo kale kaqeybqaadataa mid kamid ah seddexda koox oo sheegato Gyms.
Pokémon GO ayaa hadda laga heli karaa 27 dal oo cusub
Pokémon GO wuxuu qandhadiisa ku faafayaa 27 dal oo cusub oo si rasmi ah looga soo dejisan karo Google Play Store ama App Store.
Ha Gaajoonin jeebka jeebka ee aad u socoto Android ka hor jadwalka
Haddii taariikhda asalka ahayd ay ahayd bisha Sebtember, Ha Gaajoon hore ayey u imaan doontaa sida uu ku daabacay hal-abuurkiisa bartiisa Twitter-ka.
Maxay caleemaha soo baxa markaan baarno Pokémon GO macnahoodu yahay?
Caleemaha ka muuqda jidkeenna markaan raadineyno Pokémons waxay leeyihiin shaqeyn gaar ah oo aan ka muujinno Androidsis.
Maya, moobilkaagu ma xuma, Pokemon Go wuxuu si ku-meel-gaadh ah u joojiyay shaqada Ddos awgeed
Pokemon Go ayaa si ku-meel-gaadh ah u joojiyay shaqadii wuxuuna dhibaato kala kulmay qaybo badan oo adduunka ah sababo la xiriira weerarkii Ddos oo ay geysteen koox burcad ah oo la yiraahdo PoodleCorp
U bood oo ka fogow fallaadhaha cadowga ee Dashy Knight, oo ah ciyaar gebi ahaanba bilaash ah
Haddii aad raadineysid wax caadi ah oo xiiso leh, tayo sare leh oo gebi ahaanba bilaash ah, Dashy Knight ayaa ah kan ugu fiican xilligan qaybtaas.
Doontaada raac oo kalluumeysiga tag Kalluumeysiga
Farshaxanka kalluumeysiga waxaa laga heli karaa Kalluumeysiga Kalluumeysiga, oo ah xarrago fudud oo fudud oo aad ku yeelan doonto 200 nooc oo sugaya inaad qabato.
Talaabooyinka, cusub ee ka socda Ketchapp si loo xakameeyo xarun is rogrog ah
Ciyaaraha Ketchapp waa mid ka mid ah istuudiyaha ciyaarta fiidiyowga ee diiradda saaraya mid caadi ah waxayna ku tusaysaa tan dhammaan cayaaraha ay bilaabayaan, sida Steps.
Istaraatiijiyad-waqtiga dhabta ah ee leh Diyaaradaha Dagaalka, ciyaar cusub oo taabasho muuqaal weyn leh
Diyaaradaha dagaalka ayaa ku hor dhigaya ciyaarta istiraatiijiyadeed-waqtiga dhabta ah ee leh muuqaal muuqaal aad u wanaagsan oo waliba u taagan ciyaartoydeeda badan.
Cadowgaaga burburi! waa RTS cusub oo tayo sare leh aadna u dhaqan xun
RTS aad u qaas ah oo kuu geyn doona ciyaaro kaladuwan iyo olole hal ciyaartoy oo weyn si aadan waxba ugu seegin Cadowgaaga Burburin.
Ficillo badan ayaa kugu sugaya Ghostbusters, oo ay sii daayeen Sony iyo Activison on Android
Ghostbusters waa ciyaar ficil deg deg ah oo xambaarsan waxyaabo aad u fara badan oo la soo bandhigo iyo tayo farsamo oo weyn marka loo eego muuqaalka iyo saamaynta
Weli kama iibsan kartid jijin rasmi ah Pokemon Go Plus jihada Nintendo, inkasta oo horey loogu sii hayn karo Amazon
Inkasta oo aadan weli ka iibsan karin jijin rasmi ah Pokemon Go Plus Nintendo, waxaad horay ugu sii haysan kartaa Amazon si rasmi ah.
Wax walba oo ku saabsan Pokémon GO, ciyaarta fiidiyowga ee adduunka oo dhan waalaysa
Warar badan, tilmaamo, tilmaamo iyo fiidiyowyo ayaa soo maray khadadkan si ay kaaga caawiyaan inaad raacdo ciyaarta fiidiyaha ee sanadka, Pokémon GO
Pokémon GO ayaa hadda laga heli karaa Spain
Waxaad horey u laheyd Pokémon GO Spain maadaama si rasmi ah loo heli karo si loo cusbooneysiiyo ciyaarta, taas oo ah ifafaale bulsheed.
Hoyga Dhacdooyinka waxaa si ballaaran loogu cusbooneysiiyaa nidaam dagaal oo cusub, howgallo iyo waxyaabo kale oo badan
Hoyga Fallout wuxuu helaa cusbooneysiintii ugu weyneyd ee illaa maanta lagula diriro nidaam dagaal oo cusub, goobo cusub, hawlgallo cusub iyo kuwo kaloo badan
Pokémon GO wuxuu ku sii dhawaanayaa Yurub; laga bilaabay UK iyo Jarmalka
Pokémon GO wuxuu noqdaa ifafaale bulsheed inta aan sugeyno inuu si caalami ah u bilowdo, Jarmalka iyo Ingriiska horey ayey u heysteen.
12 ciyaarood oo fiidiyow ah oo bilaash ah oo la sii daayay 2016 oo aadan tabi karin
12 ciyaarood oo bilaash ah oo dib loo daabacay illaa iyo sanadkaan waana tusaalaha ugu wanaagsan ee waxa farshaxanka pixel uu ka yimid aaladda Android.
5 baytariyada dibedda ah si ay kuugu dalacaan taleefankaaga casriga ah inta aad ciyaareyso Pokémon GO
Pokémon GO wuxuu cunaa awood batteri xad dhaaf ah markuu ugaarsado Pokémon. Bangiyadan korantada ah ee 5 ayaa awood u yeelan doona inay yareeyaan isticmaalka
Sida looga saaro dhammaan tixraacyada Pokémon iyada oo lagu kordhinayo Chrome
Bog furaha shabakadda ee 'Chrome' waxaan leenahay ikhtiyaar aan ku baabi'in karno dhammaan tixraacyada loo sameeyay Pokémon GO iyada oo lagu kordhinayo bilaashka ah
[APK] Cusbooneysiinta Pokemon Go ee hagaajinta waxqabadka iyo taageerada Android N.
Waxaan horeyba u haysanay apk-ka cusbooneysiinta cusub ee Pokemon Go, oo ah cusbooneysiin ku saabsan hagaajinta cayayaanka iyo hagaajinta waxqabadka.
Waxaan ubaahanahay ciyaaro fiidiyoow badan sida Pokémon GO
Pokémon GO wuxuu ku guuleystey wax aan la maleysan karin waana taas in dadka laga saaro guryahooda si ay maalinta ugu qaataan ugaarsiga Pokémon.
[Post la cusbooneysiiyay 22-7-2016] Pokemon Go trick oo kuu oggolaanaya inaad ugaarsato pokemons adigoon gurigaaga ka bixin. Khuraafaad ama Xaqiiq?
Maanta waxaan shaaca ka qaadnay inay jiraan khuraafaad ama xaqiiqda ku jirta khiyaanada loo malaynayo ee Pokemon Go oo noo oggolaanaysa inaan ugaarsano Pokemons annaga oo aan ka bixin guriga.
Jaantuska noocyada weerarka / difaaca Pokémon ee aad ku noqon doontid sayid Pokémon GO
Jaantuskan oo ah noocyada weerarka iyo difaaca ayaa kuu oggolaanaya inaad ogaato Pokémon ay tahay inaad u isticmaasho si aad uga faa'iideysato la-dagaallanka ciyaartoyda kale
Pokemon Go, waxaan ku tusineynaa sida loo rakibo waxaanan ugaarsan doonnaa Pokemons-keena ugu horeeya
Maanta waxaan kugu soo bandhigeynaa muuqaal, sida ay u fududahay helitaanka Pokemon Go ee Android iyo sida ay u fududahay inaad bilowdo ugaarsiga Pokemons-kaaga ugu horeeya.
Xaqiiqooyinka aan caadiga ahayn ee layaabka leh ee uu Pokémon GO sababayo
Pokémon GO horeyba waa ifafaale bulsheed shantaan sheeko waxay xaqiijinayaan sida waalan ee dunida aan ku nool nahay ay u sii socoto.
Sida loo yareeyo isticmaalka xogta markaad ciyaareyso Pokémon GO
Pokémon GO wuxuu cunaa batteri aad u badan wuxuuna sidoo kale si wanaagsan u isticmaalaa xogta maalin kasta. Tilmaamaha qaarkood si loo yareeyo isticmaalka xogta.
Pokémon GO wuxuu diyaar u yahay inuu dhaafo Twitter-ka isticmaalayaasha maalinlaha ah ee isticmaala Android
Pokémon GO wuxuu noqonayaa dhacdo bulsho oo hadda waxaan ognahay inay ku dhowdahay Twitter-ka dadka isticmaala firfircoon ee maalinlaha ah.
Bisad Parisiyaan ah oo ka soo boodda guriga saqafka sare una gudubto Paname
Bisadan ku mashquulsan boodboodka ayaa ah halyeeyada ciyaartan aan caadiga aheyn ee loo yaqaan Paname, oo leh ciyaar gaar ah.
Ku dhaji wadiiqooyinka adigoon istaagin si uusan tareenku uga wareegin ciyaartaan xiisaha badan ee loo yaqaan Tracky Train
Tareenka Tracky waa ciyaar fiidiyoow oo aad u wanaagsan oo aad u calaamadeyn doontid jidka uu tareenku raaco oo aad rakaab ugu qaadi karto saldhigga.
Dagaalkii Nasabka, waa MMO weyn oo kor u qaadaya tayada noocyada ku saabsan Android
Dagaalkii Nasabku wuxuu ina geyn doonaa MMO si aad ufiican loo qabtay oo ay isdhexgalka dabeecaddu u muuqato in loo adeegsado furayaasha gaaban shaashadda.
Isboortiga dambiisha ayaa kugu sugaya qaabkeedii ugu fiicnaa ee NBA Live Mobile
Farshaxanka Elektiroonigga ahi wuxuu keenayaa dhammaan muuqaalka isboortiga dambiisha ee ciyaartan weyn ee loo yaqaan 'NBA Live Mobile' taasoo kaa horreysiin doonta xiddigaha hore.
Badland 2 waxay kugu quusineysaa adduun adiga kuu gaar ah oo leh fiisigis shey weyn
Badland 2 waxay isticmaashaa fiisigiska sheyga weyn si ay kuu siiso khibrad ciyaareed aad u wanaagsan oo aad ku dari karto heer farsamo iyo heer garaaf sare leh.
Super Stickman Golf 3 wuxuu kuu keenayaa ciyaarta golf-ka arcade ee ugu fiican Noodlecake Studios
Super Stickman Golf 3 waa kan ugu cusub ee ka socda Noodlecake Studios waana mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee sanadka lagu daro ciyaaraha.
Nintendo saamiyada ayaa kor u kacaya ka dib markii gobolka la bilaabay Pokémon GO
Pokémon GO wuxuu u maleynayaa in Nintendo maanta la xiray iyadoo la kordhiyay 7% saamiyada shirkadan Japan.
Pokemon Go dhibaato ayaa haysata, Nintendo's server-yaasheeda ayaa hoos u dhacaya
Pokemon Go wuxuu leeyahay dhibaatooyin, server-yada Nintendo way shaqeynayaan waxayna joojinayaan inay ka shaqeeyaan meelaha aan si rasmi ah looga soo dejin karin.
Tilmaamaha ciyaarta yar si aad u noqotid tababare Pokémon GO
Tilmaamo yar oo ciyaarta ah si aad u noqotid tababare weyn Pokémon GO oo leh qaybo aasaasi ah oo ka mid ah ciyaarta Nintendo.
Laba talo oo lagu hagaajinayo nolosha batteriga marka la ciyaarayo Pokémon GO
Laba talo oo waxtar leh si loo hagaajiyo nolosha batteriga ee casrigaaga markaad ciyaareyso Pokémon GO, ciyaar fiidiyow ah oo adeegsata GPS, shaashad iyo kamarad
Super Mario Abuuraha Miyamoto wuxuu sharaxayaa Sababta Ciyaaraha Nintendo ay ufiicanyihiin
Intii aan sugeynay labada kulan ee Nintendo ee soo socda si aan ugu degno Android, Miyamoto wuxuu sharxayaa sababta ciyaaruhu u fiican yihiin
[APK] Soo dejiso Pokémon Hada haddaba u diyaar garow inaad u baxdo ugaarsiga iyo u dagaalanka xaafadaada
Gobol ahaan, Pokémon Go waxaa laga bilaabay dalal badan sababtaan awgeed ayaan hadda u soo degsan karnaa APK si aan ugu rakibno aaladdayada.
Halxiraalaha xiisaha leh ee Zenge ayaa lagu iibinayaa Play Store-ka € 0,10
Zenge waa xujo leh tayo muuqaal sare leh iyo ciyaarta lafteeda oo aad maanta marin u heli karto si aad ugu iibsato € 0,10.
Tartamada ayaa hadda laga heli karaa Clash Royale oo lagu daray fagaare cusub iyo 4 kaar oo cusub
Tartanada ayaa ugu danbeyntii yimid Clash Royale si aad uga ciyaari karto gobolkaaga dhamaan ciyaartoydaas isku dayi doona inay qaataan xabadka ugu dambeeya
Dagaalyahanada Viking ayaa kugu sugaya orodyahankan xiisaha leh ee dhammaadka ah ee loo yaqaan Asgard Run
Asgard Run wuxuu soo jeedinayaa orodyahan aan dhammaad laheyn oo leh tayo farsamo oo aad u wanaagsan oo kuu kaxayn doonta adduunyadi dhexe ee Vikings ay yihiin halyeeyada
Tartanka baabuurta ee cajiibka ah ee udhaxeeya laba ciyaartoy oo ah garaafka cajiibka ah ee CSR Racing 2
CSR Racing 2 waa ciyaar fiidiyoow badan oo fiidiyoow ah oo jinsiyadaha u dhexeeya labada ciyaartoy ay bixiyaan adrenaline weyn, jahwareer iyo kubad wanaagsan.
Sixirka Square Enix wuxuu la soo noqdaa Final Fantasy: Brave Exvius
Square Enix waxay soo saartay RPG kale oo caalami ah: Final Fantasy Brave Exvius. Bilaash ayaad ku haysataa Play Store.
U jeex dariiqa loogu talagalay astaamaha xiisaha leh ee Ha Noqon Gaari
In Aan Lagu Gaarin Gawaarida, waa inaad u jeexdaa jidka hore halyeeyada aan joojin doonin inay ku ordaan nooc ka mid ah barxadda iyo orodyahanka aan dhammaadka lahayn.
Ku soo biir Caterpillar Bob oo ku saabsan xiisaha xiisaha leh iyo ficil-celinta Caterzillar
Caterzillar waa madal wanaagsan oo Noodlecake Studios ay mar kale garaacdo barta si ay noogu soo bandhigto ficil weyn iyo baashaal.
Redungeon waa gurguurta godka weyn ee Nitrome ee cusub
Nitrome wuxuu ku soo laabtay gurguurto god weyn oo dhamaan cayaaruhu ku kala duwan yihiin maadaama heerka si aan kala sooc lahayn loo soo saaray.
Beddel sanduuqa, ciyaar ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan Android ee aad jeclaan doonto
Maanta waxaan soo bandhigeynaa Beddelka Sanduuqa, ciyaar caadi ah oo ka mid ah kuwa ugu xariifnimada badan ee aan ku raaxeystay isku dayga terminal-kayga Android.
15-ka kulan ee ugu fiican Android video-ka ee 2016
Sannadka badhkiis ka dib, waxaan haddaba ka faalloon karnaa 15-ka kulan ee ugu wanaagsan Android ee sannadka 2016, kuwaas oo aan ka heli karno Clash Royale ama Astra.
Supercell wuxuu bixiyaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tartamada Clash Royale
Supercell wuxuu doonayaa inuu soo bandhigo qaab ciyareed cusub oo loo yaqaan tartamo kuwaas oo farxad badan u keeni doona ciyaartan weyn. Waxaan haynaa faahfaahin dheeraad ah.
Xayawaanka: Xayawaanka, Farshaxanka Farsamada 'sharad tayo sare leh-3
Xayawaanka la haysto: La furay waa ciyaar weyn-3 oo leh horumar farsamo oo wanaagsan oo aad ka heli doontid dhammaan noocyada xayawaanka rabbaayadaysan.
U adeegso awoodahaaga samada si aad u abuurto ama u baabi'iso adduunyo pixel ah 'Sandbox Evolution'
Isbeddelka Sandbox wuxuu kuu oggolaanayaa inaad marka hore gacantaada ku ogaato waxa ay u egtahay inuu yahay ilaah awood u leh inuu wax abuuro waxna burburiyo markuu doono.
Galcon 2: Galactic Conquest wuxuu kugu quusinayaa ku guuleysiga galaxyada oo leh ciyaartoy badan
Galcon 2: Galactic Conquest waa ciyaar fiidiyoow ah oo isku dhafan istiraatiijiyad iyo ciyaartoy badan si loo soo bandhigo ciyaar si heer sare ah loo soo jiito.
PKTBALL waa ciyaar tennis xiiso leh oo leh 4 ciyaartoy weyn oo ciyaartoy badan oo maxalli ah
PKTBALL wuxuu na horkeenayaa ciyaar tennis ah oo caadi ah oo aad kuheli karto dareen isku mid ah oo ay ciyaartooyda ciyaartani qaataan.
Raac xayawaanka duurjoogta ah ee Rodeo Stampede, oo ka cusub Ciyaaraha Yodo1
Rodeo Stampede waa ku cusub yahay istudiyaha mas'uul ka ah Crossy Road. Maamul xayawaan dhan oo ugaarsada xayawaanka si aad ugu tagto tas-hiilaadkaaga.
Zombieville USA 2 waxay kugu xujeyneysaa apoomiska zombie-ka oo leh toogasho weyn 'em up
Zombieville USA 2 waxay ku laabaneysaa Play Store iyadoo ay ku jiraan nuxur aad u wanaagsan iyo xasuuq zombie dhan ah oo ay tahay inaad si walba u noolaato.
5-ta kulan ee Arcade ee ugu wanaagsan Android
5 ciyaarood oo fiidiyoow ah oo loogu talagalay Android kuwaas oo kuu keeni doona daqiiqado aad u xiiso badan sida Crazy Taksi ama Double Dragon trilogy oo ah dekedo qurux badan.
Clash Royale wuxuu ka shaqeynayaa tartamo loogu talagalay cusbooneysiinta soo socota
Waxyaabaha soo socda ee Clash Royale waxay noqon doonaan tartamo loogu talagalay ciyaartoyda ugu fiican adduunka si ay ugu tartamaan abaalmarinno guuleysta.
6 waxyaabood oo ay tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan Minecraft Realms
Minecraft Realms waxay u oggolaaneysaa asxaabtaada oo dhan, ha ahaadaan kuwa ka socda Android, iOS ama Windows 10, inay ka ciyaaraan server-ka khadka tooska ah 24 saacadood maalintii, 365 maalmood sanadkii.
Maalinta Hay ayaa lagu cusbooneysiiyaa ganacsiga deriska iyo mawduuca xagaaga
Maalinta Hay ayaa la cusbooneysiiyaa ganacsiga xaafadda iyo mawduuca xagaaga ee maalinta xagaagan oo muhiimad badan u leh dad badani bilaabmaan.